Lu Weibing na-ekwu maka ụbọchị mwepụta nke Redmi na SD855 | Gam akporosis
Webọchị mmalite nke Redmi na Snapdragon 855 ka Lu Weibing tụrụ aro
Site na oge Redmi General Manager Lu Weibing kwadoro, na February, nke ahụ a ga - enwe ekwentị Redmi na - akwụ ụgwọ site na Snapdragon 855, Fans nke ika a na-atụ anya ụbọchị mgbapụta ya.
Ugbu a, iji kpalite mkparịta ụka na isiokwu a, ọkwa ọhụrụ Weibo sitere n'aka ndị isi na-atụ aro nke ahụ ọbịbịa nke njedebe dị elu nwere ike ọ gaghị anọ n'azụ.
Na nseta ihuenyo dị n'okpuru, Weibing ekwuola site na Weibo na ndị fans ekwenyeghi ma gbasaa asịrị. Ederede a sụgharịrị 'ọ bụghị ọsịsọ, adịghị nwayọ' na post Weibo gị ka ndị mgbasa ozi China jikọtara na ụbọchị mwepụta nke ekwentị Redmi flags na SD855. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụ ugbu a ka a na-ekwu na mmemme ya nwere ike ịdị nso.
Mgbe onye isi ọrụ Redmi na-ekwu "ọ bụghị ọsọ ọsọ", ọ nwere ike ịpụta na agaghị ebido igwe mkpagharị na Eprel. Ederede ahụ 'adịghị nwayọ nwayọ' nwere ike ịpụta na ụbọchị mmalite nke ekwentị flagship Redmi enweghị ike ịgafe June. Ya mere, enwere ike ime na ama ga-abụ onye isi na Mee ma ọ bụ June.
Na China, June 18 bụ nnukwu ememme ịzụ ahịa n'ịntanetị. The ụlọ ọrụ nwere ike ịbụ na-ezubere iche mwepụta nke Redmi 855 flagship ekwentị gburugburu kwuru ememme iji chụọ ahịa dị elu.
Dị iche iche ama eso dị ka Samsung, LG, Google, na ndị ọzọ na-atụ anya ịkpọsa iche iche flagship igwe si August ruo na njedebe nke afọ. Yabụ na ọ dị ka etiti afọ nwere ike ịbụ oge kwesịrị ekwesị maka mwepụta ekwentị flagship Redmi. Reportsfọdụ akụkọ ekwuola na nwere ike ibido na China dika Redmi Pro 2, mgbe ụfọdụ asịrị ndị ọzọ na-ekwu na otu ekwentị ahụ nwere ike ibido na mpụga China dị ka Poco F2.
Vidiyo gosipụtara na-egosi flagship a sịrị na ọ bụ Redmi Pro 2 na Snapdragon 855
Weibing ekwenyela na nso nso a Redmi na Snapdragon 855 ga-eji ihe mkpuchi 3.5mm nwere. Ternyaahụ, onye njikwa ngwaahịa Xiaomi, Wang Teng Thomas, wepụtara onyonyo na-egosi ngalaba-onye guzobere na onye isi ala nke Lin Xiaomi, yana ekwentị dị omimi na igwefoto selfie na mgbapụta na 3.5mm Jack, nke ga-abụ otu. . Agbanyeghị, enwere ohere na ọ bụ ekwentị ndị ọzọ, dịka Weibing kwuru flagship ekwentị ụlọ ọrụ agaghị egosipụta snaps mmapụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Webọchị mmalite nke Redmi na Snapdragon 855 ka Lu Weibing tụrụ aro
Xiaomi Mi AirDots Pro ka emeputara ya na Spain
Google mara ọkwa na ihe ọhụrụ ga-abata na Mee 7: ọ nwere ike ịbụ Pixel 3a duo